I-Avanafil powder emfutshane (330784-47-9) hplc =98% | Ukwahlula i-sex powder
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / Ukusetyenziswa kwamadoda / Avanafil powder
4.00 ngaphandle kwe 5	ngenxa ye 3 amanqaku umthengi
SKU: 330784-47-9. iindidi: Ukusetyenziswa kwamadoda, Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Avanafil powder (330784-47-9), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Avanafil powder isebenza ngokunyusa ukuhamba kwegazi ukuya kwi-penis ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Oku kunyuka kwegazi kungabangela ukulungiswa. Inzuzo ye-avanafil kukuba iqala ngokukhawuleza isenzo xa kuthelekiswa namanye ama-hormone avuselela ngesondo. Yifumene ngokukhawuleza, ifikelele ekuxininisekeni kwimizuzu eyi-30-45.
I-Avanafil ebomvu iifayile ezisisiseko
Umjikelezo omnyama we-Avanafil
Amagama eKhemikhali: I-Avanafil emfutshane
Amagama eBrama: iStendra
Ukusetyenziswa kwe-Avanafil ngokugqithiseleyo
Ngenxa yokuba i-Raw Avanafil powder iyongezelelo elitsha kwi-arsenal ye-erectile i-dysfunction drugs, makhe sijonge ngakumbi phambi kokuba sithelekise nezinye izidakamizwa ze-ED. Kwizilingo zeklinikhi, ngokubanzi i-77% yabesilisa abane-general erectile dysfunction abathi bathatha i-Raw Avanafil powder bafumana ukulungiswa ngokumalunga ne-54% yamadoda athathe indawo. Phakathi kwamadoda ane-erectile dysfunction ehlobene nesifo sikashukela, i-63% iphumelele ukulungiswa emva kokuthatha i-Raw Avanafil powder xa kuthelekiswa no-42% owathatha indawo.
Makhe sijonge kwiziphumo zenye i-12 yeveki yeSigaba seSigqibo III ngokukodwa. Inani elipheleleyo lamadoda akwa-646 ayenzelwe ngokulandelelana ukuthatha i-50, i-100, okanye i-200 mg ye-Avanafil ngemini ye-30 imizuzu ngaphambi kokuqalisa umsebenzi wesondo. Kwakungabikho mingcipheko ekudleni okanye ekusetyenzisweni kotywala. Kwimizamo yesondo ye-300 eyenziwa ngexesha lokufunda, i-64% ukuya kwi-71% yaphumelela phakathi kwamadoda athatha i-Raw Avanafil powder xa kuthelekiswa ne-27% phakathi kwamadoda athatha indawo. Ezinye iindaba ezilungileyo: i-59% ukuya kwi-83% yemizamo ye-80 kwintlobano zesondo ezenziwe ngaphezu kweeyure ze-6 emva kokuthatha i-Raw Avanafil powder yayiphumelele xa kuthelekiswa nemigudu ye-25% ephumelelayo kumadoda athatha indawo. Kwamanye amadoda, u-Avanafil powder wasebenza kancinci njengemizuzu ye-15. (Goldstein 2012)
Enyanisweni, into enye eyahlula i-Raw Avanafil powder ukusuka kwezinye izidakamizwa ezine ze-ED yindlela esheshayo isebenza ngayo. UDkt. Wayne Hellstrom, uprofesa we-urology e-Tulane University School of Medicine e-New Orleans, uchazwe kwinqaku leReuters esithi i-Raw Avanafil powder "inokubakho okukhawuleza kubhekisa ezine," njengoko iimvavanyo zekliniki zibonise ukuba zikwazi ukusebenza ngokukhawuleza njenge15 imizuzu. Nangona kunjalo, kukho iingxelo zeCialis powder esebenzayo malunga nemizuzu ye-15.
Yintoni umlinganiselo we-Avanafil powder
I-Avanafil powder iza njengetyulethi ukuthatha ngomlomo. Kuba amadoda athabatha i-100- mg okanye i-200-mg, i-Raw Avanafil powder idlalwa kunye okanye ngaphandle kokutya njengoko kuyimfuneko, malunga nemizuzu eyi-15 phambi komsebenzi wesondo, akukho ngaphezu kweyodwa ngosuku.
Kuba amadoda athatha umthamo we-50-mg, i-Raw Avanafil powder idlalwa ngokutya okanye ngaphandle kokutya njengoko kuyimfuneko, malunga nemizuzu ye-30 ngaphambi kokusebenza ngokwesondo. Ungathathi iRaw Avanafil ngokuphindaphindiweyo ngaphezu kweyure kwi-24 iiyure.
I-Avanafil ye powder works
I-Avanafil powder ebomvu ekholasini yamachiza ebizwa ngokuthi i-phosphodiesterase (PDE) inhibitors. It isetyenziselwa ukuphatha ukungasebenzi kwe-erectile (ED: ukungabi namandla; ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina ukulungiswa kwamadoda). Lo mkhiqizo wokuphucula umntu ufumana igama lakhe kwisithako saso esisebenzayo esinceda ukujikeleza kwegazi emzimbeni ngendlela eqhelekileyo. Kukho ezinye izithako ezenza i-Raw Avanafil ngokugqithiseleyo kodwa ungenayo impembelelo enkulu kunye nemiphumo eyona nto isithako esiyintloko.
Isebenza ngokunyusa ukuhamba kwegazi kwi-penis ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Oku kunyuka kwegazi kungabangela ukulungiswa. I-Avanafil i-powder i-Raw ayiyiphilisi i-erectile i-dysfunction okanye ikhulise umnqweno wesini. I-Avanafil i-powder powder ayikuthinteli ukukhulelwa okanye ukusasazeka kwezifo ezithathelwana ngocansi ezifana ne-virus immunodeficiency virus (HIV).
I-Avanafil powder e-Raw isilwanyana esisemthethweni esisetyenziselwa ukwelapha ukungabi namandla (ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina i-penile erection), eyaziwa ngokuba yi-erectile dysfunction (ED). Kudidi lwezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-phosphodiesterase inhibitors ezibandakanya i-tadalafil (i-Cialis powder), i-sildenafil (i-Viagra) ne-vardenafil (i-Levitra). Ukulungiswa kwepenisi kubangelwa ukuzaliswa kwepenisi ngegazi. Ukuzaliswa kwenzeka ngenxa yokuba imithwalo yegazi eyenza igazi kwi-penis yanda ngobukhulu kwaye ihambisa igazi elingakumbi kwi-penis, kwaye, ngexesha elifanayo, imithwalo yegazi ethatha igazi kude ne-penis yehla ngobukhulu kwaye isuse igazi elingaphantsi kwidoda . Ukuvuselelwa ngokwesondo okukhokelela ekwakheni kubangela ukuveliswa kunye nokukhululwa kwe-nitric oxide e-penis. I-nitric oxide yenza i-enzyme, i-guanylate cyclase, ukuvelisa i-guanosine monophosphate (cGMP). Yiyo i-cGMP ebaluleke kakhulu ekunyuseni nasekunciphiseni ubukhulu beemithwalo zegazi ezithwala igazi ukuya kwi-penis, ngokulandelanayo, nokudala ukulungiswa. Xa i-cGMP ibhujiswe enye i-enzyme, i-phosphodiesterase-5, imirhupha yegazi ibuyela kubukhulu bayo obuqhelekileyo, igazi lishiya ipeni, kwaye ukupheliswa kwayo kuphelile. I-Avanafil powder ebomvu ithintela i-phosphodiesterase-5 ekubhubhiseni i-cGMP ukuze i-cGMP ihlale ihlala ixesha elide. Ukuphikelela kwe-cGMP kukhokelela kwi-engorgement eyongezelelekileyo ye-penis ngegazi. I-Avanafil powder ebomvu ivunyiwe yi-FDA ngo-Ephreli 2012.
I-Avanafil Raw Powder
I-Avanafil yePowder Marketing
Ngaba i-Avanafil i-Rawfilfil ibe neempembelelo ezingamanye
I-Avanafil ebomvu ebomvu ingabangela iziphumo zecala. Tshela ugqirha wakho ukuba nayiphi na le mpawu iyanzima okanye ungahambi:
I-Avanafil powder ebomvu ingabangela ezinye iziphumo. Biza ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na ingxaki engaqhelekanga xa usebenzisa le mayeza.
Indlela yokuthenga i-Avanafil powder ukusuka kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubulungisa 99% I-Avanafil eluhlaza ngokubhekisele kwi-hormone yokukhulisa ngesondo ngokusetyenziswa komlomo ..
I-Avanafil Raw Powder Recipes: